आलेख ः मनास्लु पदमार्ग मर्मतको पर्खाइमा चुम तथा नुव्रीबासी
प्रशन्न पोखरेल, गोरखा, १७ भदौ । उत्तरी गोरखामा दुई वटा मनोरम पर्यटकीय उपत्यका छन् – चुम तथा नुव्री । चुम उपत्यकामा चुम्चेत र छेकम्पार गाविस पर्छ भने नुव्रीमा बिही, प्रोक, ल्हो र सामागाउँ पर्छन् । यी गाविसहरु हिमालपारिका क्षेत्र हुन् । सरका..
किन बन्द छन् धेरै विमानस्थल ?
(सिबी अधिकारी) काठमाडौँ, १९ साउन । मुलुकको हवाई सेवाको पहुँच देशव्यापी भए पनि यसका चुनौती यथावत् छन् । अधिकांश जिल्लामा हवाई सञ्जाल विस्तार भएको छ, तर पनि प्रभावकारी रुपमा सञ्चालनमा आउन सकेको छैन । भौगो..
प्राकृतिक पुलमुनिबाट हेरौँ ‘चाँदी जस्तो मनोरम झरना’
(हरि बास्तोला) पोखरा, ९ साउन । ऐतिहासिक, पुरातात्विक एवम् धार्मिक महत्व बोकेको पोखराको छोरेपाटनस्थित प्राकृतिक पुलमुनि गुफाबाट देखिने चाँदी जस्तै मनोरम झरना यतिखेर आन्तरिक एवम् बाह्य पर्यटकको आकर्षण बनेको छ । विश्वको एक मात्र राजमार..
विश्वका ७३ मुलुकका आरोहीले नेपालको हिमाल चढेका छन्
(रमेश लम्साल/सिबी अधिकारी) काठमाडौँ, ८ साउन । विश्वका ७३ मुलुकका नागरिकले नेपालको हिमालको आरोहण गर्ने गरेको पाइएको छ । सरकारले हालै सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्कअनुसार नेपालसहितका आरोहीले नेपालको प्राकृतिक सौन्दर्यको रसपान गरेको मात्रै..
स्थानीय तहमा कार्यविधि अनुसार योजना सञ्चालन हुँदैनन्
सन्तोष गौतम बाबियाचौर (म्याग्दी), २३ जेठ । म्याग्दीका स्थानीय निकायले सञ्चालन गरेका योजना तथा कार्यक्रममा पारदर्र्शिताको कमी देखिएको छ । जिविस, नगरपालिका र गाविसको कार्यालयमार्फत सञ्चालित योजना स्थानीय निकायको कार्यविधिअनुसार कार्यान्वयन भएका छै..
विकासको पर्खाइमा चितवनको वाल्मिकी आश्रम ( फोटो सहित )
कमला गुरुङ्ग, कालिका – “ ८८ हजार ऋषि मुनिहरुले हवन गरेको हवन कुण्ड छ, राम सीताका पुत्र लवकुशले घोडा बानेको खम्बा छ, विष्णु चक्र छ, सीतादेवीले प्रयोग गरेको सीलौटा छ, गग्रेटो छ, सीतादेवीले पानी भरेर राखेको , लवकुश जन्मेको..
श्रीमान् निमालाई डिग्री पढाउँदै
(याम प्रधान) इटहरी, १७ जेठ । सोह्र वर्षअघि सङ्खुवासभाको चेपुवाबाट कलिलै उमेरमा जडीबुटीको पन्तुरो कसेर बिक्रीका लागि धरान झरेकी गिनेन लामा त्यही वर्षदेखि सहरको रमझममा रमाउँदै धरानतिरै बस्दै आइन् । उनले आफ्नो जडीबुटी बेच्ने प..
विद्यार्थीको हात – हातमा पुस्तक खै ???
कमला गुरुङ्ग, कालिका – शैक्षिक सत्र सुरु भएको १ महिना बितिसक्यो तर पनि विद्यार्थीको हात–हातमा पाठ्यपुस्तक पुग्न सकेको छैन । यही विषयलाई हामीले पटक पटक घच्घच्याउनु पर्ने यस्तो अवस्था छ । चितवन जिल्लामा मात्र नभई अधि..
केरा कृषकलाई विमाले केही राहत
कमला गुरुङ्ग, कालिका – के तपाईले आफ्नो केरा खेतीको विमा गर्नुभयो ? यदी गर्नु भएको छैन भने होसियार ।।।।। हावाहुरी र झरी पर्ने यस मौसमले तपाईको केरा खेतीमा लागेको मेहनत र पसिनालाई सखापै पारिदिन सक्छ । चितवन जिल्ला..
माओवादी एकताको घोषणाले खुसी छन् सहिद र बेपत्ता परिवार
(रमेश लम्साल) काठमाडौँ, २ जेठ । विभिन्न समूहमा विभक्त (माओवादी) घटकबीच एकता प्रक्रिया सुरु भएपछि दश वर्षे सशस्त्र युद्धको क्रममा सहादत प्राप्त गरेका र बेपत्ता भएका नागरिकका परिवारले खुसी व्यक्त गरेका छन् । माओवादी सशस्त्र य..
काठमाडौँ, १ जेठ । सरकारले आगामी आवका लागि नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरेको विद्यार्थीलाई शैक्षिक प्रमाणपत्रका आधारमा ऋण दिने विषयलाई सघन छलफलमा ल्याएर निष्कर्ष दिनुपर्ने औँल्याइएको छ । एकीकृत नेकपा(माओवादी) निकटको अखिल नेपाल राष्ट्रि..
सङ्घर्षबाट समृद्धितर्फ मुक्तकमैया दम्पती
भीमदत्तनगर, १ जेठ । सङ्घर्ष गरे परिवार समृद्धिको दिशामा अघि बढ्नुका साथै सुख, एैस आराम मिल्छ भन्ने उदाहरण बनेका छन, कञ्चनपुरको कृष्णपुर नगरपालिका–४ का मुक्तकमैया मोहन चौधरी । विसं २०५८ सालअघि यहाँकै शङ्करपुर गाविसमा रहेको साहुजन..